‘सहकारी अभियानलाई अझै गतिशील बनाउन मेरो उम्मेदवारी’ | Nepal's First Co-operative News Portal.
Home अन्तर्वार्ता [Interview] ‘सहकारी अभियानलाई अझै गतिशील बनाउन मेरो उम्मेदवारी’
राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेपाल
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । निर्वाचनसहितको साधारणसभा नजिकिएको छ । अबको योजना कस्तो बनाउनु भएको छ ?
विगत २४ वर्षदेखि सहकारी अभियानमा छु । प्रारम्भिक सहकारीका १२ वर्ष अध्यक्ष भएर काम गरे । जिल्ला सहकारी संघ, धादिङको १५ वर्ष अध्यक्ष भए । नेफ्स्कूनमा २ कार्यकाल अध्यक्ष भएर काम गरे । १० वर्ष सहकारी महासंघको सञ्चालकको भूमिकामा रहे । पछिल्लो चरणमा ५ वर्ष वरिष्ठ उपाध्यक्षको भूमिकामा छु । निरन्तर यही सहकारी अभियानमा छु । सहकारीको समग्र विषयवस्तु, समस्या, यसले गर्नसक्ने कामको दायरा र क्षेत्रहरुको बारेमा एकदमै नजिकबाट बुझेको छु । सहकारी क्षेत्रको समस्या, चुनौती र अवसर धेरै छन् । सहकारी क्षेत्रले गर्नसक्ने धेरै छन् । नेपालको सहकारी अभियानलाई अझै गतिशिल बनाउन महासंघको अध्यक्षको लागि दाबी गरेको छु । सहकारीकर्मीको साथ पाएको छु ।
यदी अध्यक्ष भएको अवस्थामा के–के काम गर्नुहुन्छ ?
अध्यक्ष भैसकेपछि गर्नुपर्ने विषयहरु धेरै छन् । खासगरी संविधानले सहकारीलाई महत्व दिएको छ । तीनै तहको सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने सन्दर्भमा सहकारी क्षेत्रलाई अझै व्यवस्थित बनाउँदै लैजाने कुरामा प्रतिवद्ध छु । सहकारीमार्फत उत्पादन व्यवसायमा लैजानु पर्दछ भनेका छौं । राज्यले निषेध गरेका काम बाहेक सबै क्षेत्रमा सहकारीले काम गर्न सक्छ । र, जान्छ पनि । कानुनी रुपमा केही बाधा अवरोध छन् । यसलाई परिमार्जन गर्दै लैजान्छौं । सहकारीमैत्री कानुन बनाउने छौं । वित्तीय क्षेत्र मात्र नभई कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र कुनै पनि व्यवसायिक क्षेत्रमा जाने वातावरण बनाउने छौं ।
सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा ठूला ठूला परियोजना गर्न सक्छौं । लगानीका क्षेत्रमा पनि सहकारीलाई आवद्ध गराएर उत्पादन र व्यवसायिकरणमा जोड्ने छौं । मुलुकको उत्पादन बढाउने, आयात कम गराउन सहकारीको भूमिकालाई बढाउने छौं । जिडिपिमा योगदान बढाउने छौं । गरिबी न्यूनिकरण, रोजगारी बढाउने काममा सहकारीले भूमिका खेल्ने छ । यी र यस्ता विषयमा पहल गर्न म सक्षम छु । सहकारी अभियानलाई माथी उठाउने सन्दर्भमा मेरो भूमिका रहने छ ।
नेपालमा कस्तो सहकारी अभियानको परिकल्पना गर्नुभएको छ त ?
पञ्चवर्षिय रणनीतिक योजना विगतमा बनायौं । त्यसलाई पुनः परिमार्जन गरेर अघि बढ्ने छौं । दीर्घकालिन योजना बनाउने छौं । सरकारसँग सहकार्य गरेर अल्पकालिन र दीर्घकालिन योजना बनाउने छौं । सहकारी क्षेत्रले उत्पादनमा कसरी योगदान पु¥याउन सक्छ ?लगायतका विषयका योजना बनाउन जरुरी छ । कृषि जन्य उत्पादनमा सहकारीलाई बढी फोकस गर्न जरुरी छ । तरकारी, फलफुल, मासु, माछा, दुग्ध जन्य पर्दाथमा सहकारीलाई जोड्नु पर्दछ । सहकारीमार्फत खेती गर्नु आवश्यक छ । सेवाका व्यवसायमा सहकारी जानु पर्दछ । स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग धन्दामा पनि सहकारीलाई जोड्नु पर्दछ । कानुनी समस्या भएको ठाउँमा कानुन परिमार्जनमा जोड महासंघले दिनेछ । केही व्यवसायिक योजना महासंघले बनाएको छ । विगतमा भएको कामको समिक्षा गर्दै नयाँ नयाँ काम गर्ने छौं । राज्यको परिपुरक सहकारी क्षेत्र हो । आवधिक योजना निमार्ण गरेर अघि बढ्ने छौं ।
नेपालमा सहकारी अभियान सुरु भएको ६ दशक पुरा गरिसकेको छ । तर, पनि सहकारी क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन । के हामीले सहकारी बुझाउन र बुझ्न नसकेका हौं त ?
राज्यले गठन गरिदिएका सहकारी फस्टाउन सकेन । २०४६ साल पछि प्रजातन्त्र पुर्नस्थापित भयो । २०४८ सालमा सहकारी ऐन जारी भयो । त्यसपछि सहकारीले गति लिएको हो । त्यसपछि केही विकृती र समस्या पनि आए । अहिले उल्लेखनीय प्रगति सहकारीले गर्न सफल भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको सहकारी अभियान उच्च स्थानमा छ । विभिन्न समुदायमा सहकारी पुगेको छ । गाउँ गाउँमा सहकारी पुगेका छन् । करिब ३ सय सहकारी उत्पादन, व्यवसायमा गैसकेका छन् । पुँजी परिचालन, संकलनमा सहकारीको योगदान बढ्दै गएको छ । हरेक क्षेत्रमा सहकारीअघि बढेको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै लैजानु पर्दछ । समग्रमा सहकारीको ग्रोथ बढेको छ ।
सहकारी क्षेत्र राजनीतिक गर्न प्रयोग भयो भन्ने सुनिन्छ । सहकारी महासंघ राजनीति गर्नकै लागि हो की सहकारी क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनको काम गर्ने हो ?
सहकारी महासंघले सहकारीको प्रवद्र्धन र विकास मै काम गर्ने हो । सहकारीी व्यवसायिक संस्था हाे । मुल काम भनेको सहकारी अभियानको पक्षमा लविङ र वकालत गर्ने नै हो । सरकारको परिपुरक हौं । नेपालमा उत्कृष्ठ सहकारी बनाउने काम महासंघको हो । ऐन, कानुन सहकारी मैत्री बनाउने काम महासंघले गर्ने हो । राजनीतिक करणभन्दा पनि सबै राजनीतिक दलमा सहकारीको कुरा पु¥याएर महत्व दिन लगाउने हो । राजनीतिक दलका नेतालाई सुसुचित गराउने, लविङ गराउने हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको वेष्ट प्राक्टिक्सलाई नेपालमा लिंक कराउने हो । प्रविधिमा विकास गराउने काम महासंघले गर्ने छ ।
सहकारीले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा सघाउ पुर्याउँदछ ।
सहकारीका सञ्चालक, कर्मचारीलाई शिक्षा तथा तालिम प्रदान गर्न महासंघले के भूमिका खेल्न सक्छ ?
महासंघले नियमित गर्दै आएको छ । पछिल्ला दिनमा महिनाको ४/५ वटा तालिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । महासंघले उच्च स्तरको तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ । सञ्चालक, कर्मचारी सबैको लागि हुने उच्च तहको तालिम सञ्चालन गर्नु पर्दछ । सक्षम नेतृत्व, कर्मचारी बनाउन महासंघले भूमिका खेल्दछ । तालिम कोष पनि बनाएका छौं । सहकारीको सिद्धान्त अनुसार नै अघि बढाउने लागि रहेका छौं । विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै जाने छौं । सक्षम नेतृत्व निमार्ण गर्ने काममा महासंघले ध्यान दिनेछ ।